चितवनको भण्डारामा राप्ती गोल्डकप हुने, विजेता लाई २ लाख नगद पुरुस्कार - Tamang Online
चितवनको भण्डारामा राप्ती गोल्डकप हुने, विजेता लाई २ लाख नगद पुरुस्कार
असोज ८ गते । चितवनको भण्डारामा प्रथम राप्ती गोल्डकप २०७५ यही असोज १७ गतेदेखी ,३० गते सम्म हुने भएको छ । आयोजक हर्दी युवा समाजले आईतवार पत्रकार सम्मेलन गरी असोज प्रतियोगिताकाबारे जानकारी गराएको हो ।
पूर्वी चितवनमै पहिलो पटक हुन लागेको गोल्डकपमा एक विभागिय टिमसहित देशभरका १४ वटा टिमको सहभागीता रहनेछ । प्रतियोगिताका संयोजक विकास मोक्तानका अनुसार शशस्त्र प्रहरी वल(एपिएफ) सहित कास्की ११,रुपेन्देही ११,लालवन्दी ११,निजगढ ११,चौधरी ११ बारा,युथ युवा स्पोट्स बीरगंज,विजययुथ मकवानपुरको सहभागीता रहनेछ ।
त्यस्तै नवलपरासीको अभिषेक चर्च,बीरगंज युथ एकेडेमी, चितवनका एभरेष्ट फुटवल क्लव,भरतपुर फुटवल क्लव,रामपुर फुटवल क्लव र आयोजक हर्दि युवा समाजले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । एपिएफ र रुपन्देही ११ ए डिभिजन लिग खेलिसकेका टिम हुन् । सहभागी टिमले प्रत्येक खेलमा ३ जना विदेशी खेलाडी समेत खेल्न पाउने व्यवस्था मिलाईएको संयोजक मोक्तानले वताए ।
प्रतियोगिताको विजेताले शिल्डसहित नगद २ लाख २ हजार २२२ रुपैया तथा उपविजेताले रनर्स अफ ट्रफी सहित नगद १ लाख १ हजार १११ रुपैया प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै विभिन्न ६ विधामा उत्कृष्ठ खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई समेत पुरस्कृत गरिने छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ खेलाडी,उत्कृष्ठ रक्षापंक्ती,सर्वाधिक गोलकर्ता,उत्कृष्ठ गोल रक्षक,उत्कृष्ठ मध्यपंक्ती र उत्कृष्ठ टिम कोचलाई नगद ५,५ हजारका दरले पुरस्कृत गरिने आयोजक हर्दि युवा समाजका अध्यक्ष शम्भु वि.क.ले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष विकका अनुसार प्रतियोगितामा दर्शकका लागि ५० रुपैया प्रवेश शुल्क लिईनेछ । प्रतियोगितामा राप्ती नगरपालिका ६ स्थित भण्डारा माध्यमिक विद्यालयको चौरमा हुनेछ । फाईनलको अघिल्लो दिन चितवन र नवलपरासीका महिला टिमबीच र भेट्रान्स खेलाडीबीच मैत्रीपुर्ण खेल हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा राप्ती नगरपालिका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले गोल्डकपले राप्ती नगरपालिकालाई राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन मद्यत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
« तामाङ समाज कतारको”प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम”मा जय गोले प्रमुख वक्ता (Previous News)
(Next News) स्मार्टफोन तात्ने समस्या छ ? अपनाउनुस् ५ टिप्स »
तामाङ युवा घेदुङ कास्कीद्वारा सोनाम ल्होछारको अवसरमा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न
यूएईमा नेपालको ऐतिहासिक जित, टी ट्वान्टी सीरिज पनि कब्जा
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन एकैदिन ४ करोड उठ्यो, कसले कति दिए ?
नेपालका रोहित कुमार पौडेलले तोडे सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड
लुका मोड्रीचले तोडे रोनाल्डो र मेसीको एकाधिकार !